Ronaldo oo Gool dhaliyey Soo Noqoshadiisii – Kulan Real Si fudud u Dubatay Osasuna
HomeWararka MaantaRonaldo oo Gool dhaliyey Soo Noqoshadiisii – Kulan Real Si fudud u Dubatay Osasuna
Cristiano Ronaldo ayay ku qaadatay lix daqiiqo oo kaliya inuu shabaqa ku xareeyo goolkii koobaad , kulankii u horeeyey ee uu Real Madrid ku soo noqdo, ciyaar ay si fudud u qawracday Osasuna si ay halkaas uga sii wado bilowga 100 % ka ah ee ay La Ligaha ku daah furtay xili ciyaareedkan.
Ronaldo, ayaa ka soo noqday dhaawac jilibka ah, kaas oo soo gaadhay ciyaartii laga dhex qaaday ee xulkiisa qaranku ku qaaday koobkii Euro 2016, waxanu ka faaiidaystay kubbad uu soo jebiyey Gareth Bale.
Danilo ayaa mid labaad raaciyey wax yar uun kadib markii uu birta garaacay Unai Garcia oo u sigay inuu goolka barbaraha u saxeexo Osasuna.
Sergio Ramos iyo Pepe ayaa labaduba kubbado madax ah ku dhaliyey goolal kubbado uu soo laagay Toni Kroos oo koorne ahaa, Luka Modric ayaa isna ka shanaad ku sii kordhiyey natiijada, ka hor intii aanay Oriol Riera iyo David Garcia laba gool u soo bedin Osasuna.
Kooxda martida ahayd – oo sidoo kale heshay rigoodhe uu ka badbaadiyey Kiko Casilla laagii Roberto Torres – ayaa ciyaarta 10 laacib ku dhamaystay kadib markii kaadhka cas laba huruudood isu bedeleen difaacyahankooda Tano Bonnin garoonka lagaga saaray, kaas oo xanaaqadii huruuda labaad uu ku mutaystay ahayd markii uu xaga dambe ka xanaaqadeeyey Nacho.